ISamoa Airways ngoku ivulelwe ukubhukisha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » ISamoa Airways ngoku ivulelwe ukubhukisha
Airlines • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • Iindaba zaseSamoa eziziiNdaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
ISamoa Airways (OL), inqwelo moya entsha yase Samoa, ichaze iShedyuli yasebusika eseMantla njengoko ilungiselela ukumilisela iinkonzo ngejeti ngomhla we-14 kweyeNkanga ukusuka kwindawo yayo kwisikhululo senqwelomoya saseFaleolo.
Ishedyuli inezindiza ezi-6 phakathi kweApia neAuckland kunye neenkonzo ezi-2 phakathi kweApia neSydney ngeveki, kwaye ziya kusebenza ukuya kuthi ga ngomhla wama-24 kuMatshi (2018).
ISamoa Airways iza kubhabha ukusuka eAuckland ukuya eApia ngoMvulo, uLwesibini, uLwesithathu, uLwesine, uLwesihlanu nangoMgqibelo- kwaye zindiza ukusuka eApia ukuya eAuckland ngolwesiBini, Lwesithathu, Lwesine, Mgqibelo, NgoLwesihlanu nangeCawa.
Iya kubandakanya neendlela ezimbini phakathi kweSydney neApia eziza kubhabha ngoLwesine nangoMgqibelo.
Ukulungelelaniswa, okubaluleke kakhulu kwinqwelo-moya kunye nokunikezelwa kwayo, yinto ebalulekileyo yeshedyuli. Iindwendwe ezihamba ngeAuckland ukuya nokubuya kwezinye iindawo eNew Zealand ziya kuba nesibonelelo sonxibelelwano losuku olunye (ukuya nokubuya eApia), ngelixa abakhweli abahamba bejikeleza iAustralia ngeSydney banokunxibelelana ngqo ukuya eApia kwangolo suku lunye.
I-Airline iyakuqonda ukubaluleka kweNew Zealand neAustralia kushishino lwezokhenketho eSamoa, kunye nosapho olomeleleyo, uluntu, inkcubeko kunye namakhonkco eshishini iSamoa elinayo ngala mazwe mabini. I-Airline iqinisekile ukuba iinqwelomoya, ikakhulu ezisebenza emini, ziya kuxhasa uphuhliso oluqhubekayo lwamacandelo ezolonwabo kunye namashishini kwaye zibonelele abathengi kwibhodi yonke kukhuphiswano.
Zonke iinqwelomoya ziya kusebenza kusetyenziswa i-Boeing 170-2 enezitulo ezingama-737 -800 kunye nezihlalo ezisi-8 kwiBusiness Class kunye nezihlalo ezili-162 kwikhabhathi yezoQoqosho.
Iinqwelomoya ngoku zivulelwe ukubhukishwa kwaye abakhweli banokukhetha kwiirhafu ezahlukeneyo ukusuka kwi-FIAFIA SAVER (ukubhukisha kwangoko) ukuya kwi-FIAFIA PREMIUM (kudidi lweshishini).